June 12, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 7
Saraakiisha ciidanka Puntland Gaar Ahaan Taliyaha Qeybta 26 Aad ayaa ka hadlay Xaalada Gobolka Sanaag iyo Waliba maleeshiyaad Maamulka SNM Ka soo Goostay oo isku soo dhiibay Puntland.
Dhanka kale saraakiisha Ayaa fariin u diray Horgalada Dhulbahante uguna baaqay in ay Maran wadadii ay Maren Sarakiishi Warsangali.
Ha inooku yeerina kuwaas, waa dad madaxa ka jirran waa dad adoonsiga jecel, waa dad Somalinamada laga fogeeyey. hadey idiin yimaad
Shay walba tayadiisa uun baa u xayaysiin ah oo ama dadka u soo jiidda ama se ka sii didisa. Puntland haddii ay iyadu marka hore waxa ay tahay la fahamsan yahay oo lagu qanacsan yahay ayada ayaa xayaysiin isugu filnaan lahayd. Hadda se la ma yaqaanno macnaha dhabta ah ee ay Puntland ku fadhido iyo cidda ay matasho waayo ma aha tii 1998kii la wada yagleeshay iyo wax ku dhaw toona.
Meel ay ka bilaabanto iyo meel ay ku dhammaato ma cadda. Dowrka iyo dalka intiisa kale ku leedahay iyo qaddiyadda u taagan tahay midna cidi wax kama garanayso. Bal horta iyadu waxa ay tahay ha meel marsato oo ha la af garto si markaasi cidda ay u cuntamayso ugu soo hirato oo tii kale na ay ka daneysato. Puntland “Identity Crisis” baa ku dhacay oo ay u baahan tahay in ay iska daweyso.
Haddii ay yimaadaana soo noqon mahayaan sidoodii?Hase ahaatee dhulbahante oo dhan ma aha ee raggaasu waxay u badan yahiin labo reer oo ka mida beel weeynta saciid Harti.Haddii ay yimaadaan puntlaan laga yaabee in ay rag kale jiitaan oo ay hargeysa dib ugu noqdaan ee meeshooda hala joogeen Muuse Bixi illaa isagaa yaqaan sida loola macaabiltamee.
Dhabayacada meesha ka dhuusdhuusasa waxan idin sheegayaan dhulbahante weligiin idin difaaci maayee wax iska celiya oo dagaalama hadaad tamar leedihin.
Idinka iyo warsangeliba dhulbahante dhabarkiisa haka soo nacnaclenina wallahi hadan idinku soo daayo bosaso iyo garowaba waad ka qaxaysaan fulayayohow naagaha.
Dhulbahante maaha askar aad lacag siisan oo idin difaacaysa, yaa xawayaan.
Isaaqa idin dhaama.
Iidoor magaca “Darwiish” isku soo qariyay anaga dhakhsahaas nooga ma siri karo maandhe ee nacnacda musaskiina la aad.
-> “wax iska celiya oo dagaalama hadaad tamar leedihin”
-> “Dhulbahante maaha askar aad lacag siisan oo idin difaacaysa”
-> “Idinka iyo warsangeliba dhulbahante dhabarkiisa haka soo nacnaclenina”
Typical hadaaqa iidoor weeye oo aan barxanayn. Mindhaa Dhulbahantaa u reer abti ah qiyaastayda. Ma Dhulbahante isku duuban oo dhabar lagu daba gabbado leh baa jira markeeda hore ba?
Anaga la isu ma keen qariyo oo la isku kaaya diri karo yaa dabacayuun.
Binti girl… ciidan ma leedahay ? Af uruuur 4 ciyaal ah ayaa qabsaday way ka saari ladahay. iidoorkii caawin lahaa way diiday.. binti girl wax iska dhici baaaayo.
Habar dhabayaco ah waaalan , qabiil waalay ayaa waxay leedahay siilkayga ha la difaaco…